प्रेम आले उत्रिए फिल्डमा, दलालका माेबाइ कब्जा गर्दै छानबिन गर्न थालेपछि एयरपाेर्टमा भागा-भाग ! – Points Nepal
प्रेम आले उत्रिए फिल्डमा, दलालका माेबाइ कब्जा गर्दै छानबिन गर्न थालेपछि एयरपाेर्टमा भागा-भाग !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १८, २०७८ समय: १३:००:४२
काठमाडाैँ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालय समयमा व्यक्तिगत मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।
भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीमा कर्मचारीको मिलेमतोको आशंकापछि मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।
पुष्पराज शाही, विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख
ड्युटीमा रहेको अवस्थामा कर्मचारीको व्यक्तिगत मोबाइल
लकरमा राख्न थालिएको छ । कसैले अत्यावश्यक परेमा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको स्वीकृतिमा मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । नत्र ल्यान्डलाइन र सरकारी मोबाइल मात्र प्रयोग हुन्छ ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू खाडी देश र मलेसिया पुगेको खुलेपछि कर्मचारीमाथि निगरानी बढाइएको छ ।
अराइभल र डिपार्चर डेस्कमा बस्ने कर्मचारीले अब अफिसियल मोबाइल मात्र बोक्न पाउने विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाहीले बताए ।
विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनमा भिजिट भिसामा विदेश जानेको विवरण पठाएर सेटिङ हुँदै आएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेपछि व्यक्तिगत मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । ‘ड्युटीमा रहेको अवस्थामा कर्मचारीको व्यक्तिगत मोबाइल लकरमा राख्न थालिएको छ
अध्यागमन प्रमुख शाहीले भने, ‘कसैले अत्यावश्यक परेमा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको स्वीकृतिमा मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । नत्र ल्यान्डलाइन र सरकारी मोबाइल मात्र प्रयोग हुन्छ ।’ सरकारी कामका लागि अध्यागमनले नै कर्मचारीलाई छुट्टै मोबाइल र सिमकार्ड उपलब्ध गराएको छ ।
केही दिनअघि अध्यागमन विभागले गरेको छड्केमा केही कर्मचारीको मोबाइलसमेत बरा’मद गरेको थियो । जसमा शं’कास्पद सम्पर्क देखेपछि उनीहरूको सरुवासमेत गरिएको स्रोत बताउँछ ।
सन् २०२१ मा करिब एक लाख नेपाली भिजिट भिसामा खाडी र मलेसिया गएका छन् । त्यसमध्ये कतिपय घुम्न र कामकै लागि गएका भए पनि धेरैजसो कामको खोजीमा गएको प्रारम्भिक छान’बिनमा खुलेको छ । त्यसरी गएका हजारौँ नेपाली अल’पत्र परेपछि गत सातादेखि खाडी र मलेसिया जान कडाइ गरिएको छ ।
वार्षिक न्यूनतम ६ लाख आय भएकालाई मात्र घुम्ने हकमा ती देश जान दिने निर्णय भएको छ । थप प्रस्ट माप’दण्ड बनाउन गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । तर, मानव तस्करीमा संलग्न गिरोह र कर्मचारीमाथि भने अनु’सन्धान हुन सकेको छैन ।
Last Updated on: February 1st, 2022 at 1:00 pm
७२९ पटक हेरिएको